Rexuiz, Trepidaton uye Smokin 'Pfuti: 3 mimwe mitambo yeFPS yeGNU / Linux | Kubva kuLinux
Rexuiz, Trepidaton uye Smokin 'Pfuti: 3 Mamwe FPS Mitambo yeGNU / Linux
Nhasi, isu tichataura nezve zvimwe zvinonakidza FPS mitambo, iyo yatichawedzera kune yedu Chinyorwa cheMitambo Del Genre FPS (Chekutanga Munhu Shooter), uye mazita avo ndi Rexuiz, Trepidaton uye Pfuti dzeSmokin '.
Sezvakakurukurwa pazasi, rondedzero yacho ndeyakareba uye inonakidza. Uye zvakare, mitambo yese yakaunganidzwa inogona kunakidza vazhinji. Ndokusaka, sekutaura kwatamboita pane dzimwe nguva, paine chipo chikuru chiripo de FPS mitambo nokuti Linux, tisingaverenge iwo emamwe marudzi.
FPS: Akanakisa Ekutanga Munhu Shooter Mitambo Inowanikwa yeLinux
Kusanganisira yanhasi 3, izvi zvese ndezvedu Rondedzero yemahara uye yemahara yemahara FPS Mitambo yeLinux:
Dunhu reMuvengi - Nhaka
Dunhu reMuvengi - Quake Wars
Wolfenstein - Nzvimbo yeMuvengi
Kana paine chero munhu anoda kuverenga zvakawanda nezve yega yeiyo FPS mitambo ataurwa, unogona kuongorora yedu yapfuura inoenderana posvo yataurwa pazasi, mushure mekupedza ino yazvino posvo:
1 Mimwe Mitambo yeFPS: Rexuiz, Trepidaton uye Pfuti dzeSmokin '
1.3 Smokin 'Pfuti
Mimwe Mitambo yeFPS: Rexuiz, Trepidaton uye Pfuti dzeSmokin '
Kubva pane ino yakavhurwa sosi FPS Mutambo runotevera ruzivo rwakamira kunze
Iyo yemahara online mutambo (Free2Play), isina zvemukati zviitiko uye zvakavanzika mhosva.
Inoenda kune yazvino vhezheni vhezheni, nhamba 2.5.2-210206, yakaburitswa mazuva mashoma apfuura.
Chaizvoizvo iri imwe nzira mutengi weNexuiz Classic nezvazvino zvitsva.
Inogona kumhanya nyore pane yakaderera-zviwanikwa makomputa.
Iyo inopa yekukurumidza uye inonakidza kupfura kurwa chiitiko.
Inosanganisira nzira yemushandirapamwe kubva kuQuake I.
Kunze kwake zviri pamutemo webhusaiti, ipo paine zvinyorwa zvakanaka, zvidzitiro uye mavhidhiyo acho, unogona kushanyira zvinotevera zvinongedzo sourceforge y GitHub kuti uwane mamwe mashoko.
Ndiwo mutambo wakanangana neIOQuake3 injini.
Mutambo unosanganisira pakati pezvinhu zvakawanda: makumi maviri nematanhatu ematanho (mepu), kuenderana neQuake 21 uye Star Trek Voyager Elite Force mepu, yekutanga kurira ine gumi gumi madiki, 3 mutambo modhi uye Izwi pamusoro peIP rutsigiro mumutambo (VoIP).
Kutanga kwayo kwakatanga muna Kubvumbi 9, 2006, nenhengo dzenharaunda yeStar Trek Elite Force yemitambo, nechinangwa chekuvaka yemahara sci-fi-themed yekutanga-munhu shooter mutambo. Uye kunyangwe panguva iyo chirongwa ichi chisina kupera, chirongwa ichi chichiri kuvandudzwa, ine vhezheni 0.0.27, yemusi wa12-17-2019, inowanikwa kuti itorwe.
Kunze kwake zviri pamutemo webhusaiti, ipo paine zvinyorwa zvakanaka, zvidzitiro uye mavhidhiyo acho, unogona kushanyira zvinotevera zvinongedzo GitHub y Planet Kugadzirira kuti uwane mamwe mashoko.
Ndiwo mutambo unogona kutariswa sekutendeuka kwese kweQuake III Arena kubva kune id Software.
Smokin 'Pfuti inoitirwa kunge iri semi-chaiyo yekufananidza yemamiriro makuru eiyo' Old West 'uye yakagadziridzwa paId Software's Quake III Arena injini.
Yakazvarwa pasi pezita rekuti Western Quake kutenderedza 2003. Uye yakatanga kugadzirwa nechikwata chinozivikanwa se Iron Claw Interactive. Muna 2005 mutambo uyu wakapinda mumaoko echikwata chinonzi "Iyo Smokin 'Pfuti" uyo muna2008 akatanga chirongwa chakazvimirira, pasi pezita rimwe chete. Parizvino vhezheni yaro yazvino yakagadzikana iri 1.1, yakanyorwa muna 2012.
Mutambo uyu unosanganisira zvombo zvitsva zvachose zvine ruzivo rwechokwadi pamusoro pekukuvara, mwero wemoto, kurodha zvakare nguva, pakati pezvimwe zvakakosha. Izvo zvinosanganisirawo mhando nyowani yemitambo uye mepu zvinonyanya kufemerwa nemamuvhi. Uye mimhanzi mimhanzi uye manzwi akagadziridzwa kune ino nguva, kuwedzera kune kunzwa kwe "gunslinger chiitiko."
Iyo inopa chaiyo kukuvara system ine nzvimbo dzakasiyana (musoro, chifuva, mutsipa, nezvimwewo) uye kudonha kukuvara zvichienderana nehurefu. Mhando nyowani dzekumadokero-dhizaini mutambo wekunakidzwa zvakanyanya: Kubiwa kweBhangi uye nzira dzekuita Mari sisitimu inobvumidza kutengwa kwemidziyo nemari kubva kune mibairo uye kuunganidzwa. Iyo iri nyore-kushandisa graphical mushandisi interface uye HUD. Uye kumwe kuvandudzwa kudiki kwekuvandudza Gameplay uye kuwedzera kunakidzwa.
Su zviri pamutemo webhusaiti ine zvinyorwa zvekare, screenshots uye mavhidhiyo acho, asi ayo manual y wiki Vasai zvinogona kubatsira zvakanyanya, kana mumwe munhu achida kuzviedza.
Chekupedzisira, uye sekuwedzera, tinokurudzira kuverenga uye kuyedza imwe inonakidza FPS mutambo akadanwa «Vakuru» unova mutambo wakasununguka wemukati wakasarudzika zvichienderana ne Doom. Uye zvakare, zvinoenderana nevagadziri vayo inoenderana ne nadzurudzo yemutambo ("mods") yakagadzirirwa yemitambo yekutanga ye Doom, Yakagadzirwa nevateveri uye maartist e Doom mumakumi ose emakore.
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" Pane izvi 3 FPS Mitambo most called «Rexuiz, Trepidaton y Smokin' Guns», iyo yatinoisa mune yedu «Chinyorwa chemahara uye emahara emuno FPS Mitambo yeLinux »; ndeyekufarira kukuru uye kushandiswa, kweiyo yese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Rexuiz, Trepidaton uye Smokin 'Pfuti: 3 Mamwe FPS Mitambo yeGNU / Linux
Sailfish 4.0.1 inosvika neinogadzirisazve dhizaini, kugadzirisa uye nezvimwe